Raha manana tetikady na sary ianao, nefa tsy manam-potoana na fitaovana hamita ny endriny, afaka manampy anao izahay.
Misy dingana 11 amin'ny fizotry ny famolavolana PCB & ny fikorianan'ny asa izay fonosinay ao amin'ilay torolàlana momba ny famolavolana pcb.
Dingana 1: hamarano ny endrika famolavolana anao
Dingana 2: Misafidiana rindrambaiko PCB Design
Dingana 3: Alao ny scématizanao
Dingana 4: Famolavolana dian-tongotra Component - Raha vantany vao tapitra ny skemazy hanoritana ny drafitra ara-batana ho an'ny singa tsirairay. Ireo drafitra ireo no apetraka amin'ny pcb amin'ny varahina mba hametrahana ireo singa apetaka amin'ny takelaka tariby vita pirinty.
Dingana 5: apetraho ny drafitra PCB - Ny tetik'asa tsirairay dia misy fameperana mifandraika amin'ny drafitra birao. Tokony hofaritana amin'ity dingana ity izany satria ny hevitra momba ny isa sy ny faritra no tokony ho fantatra.
Dingana 6: Fitsipika famolavolana fametrahana - Rehefa vita ny drafitra pcb sy ny dian-tongotra pcb dia izao ny fotoana hanombohana ny fametrahana azy. Alohan'ny fametrahana dia tokony apetrakao ny lalàna momba ny famolavolana mba hahazoana antoka fa tsy mifanakaiky ireo singa na soritra. Ity dia ohatra iray fotsiny amin'ny mety misy fitsipika an-jatony maro azo ampiharina amin'ny famolavolana pcb.
Dingana 7: Mametraha Components - Fotoana izao hampihetsehana ny singa tsirairay ao amin'ny pcb ary manomboka ny asa mandreraka amin'ny fampifanarahana ireo singa rehetra ireo.
Dingana 8: Làlan'ny zotram-pifandraisana - Ilaina ny manisy tanana ireo dian-tsikera.Clocks.Power.Sraces analogical sensitive.Raha vita izany dia azonao atao ny mamadika azy amin'ny dingana 9.
Dingana 9: Mampiasa ny Auto Router - Misy lalàna vitsivitsy izay tsy maintsy ampiharina amin'ny fampiasana autorouter, fa ny fanaovana izany dia hamonjy anao ora maro raha tsy andro fitiliana.
Dingana 10: Run Design Rule Checker - Ny ankamaroan'ny fonosana rindrambaiko famolavolana pcb dia manana fametrahana tsara ny mpanamarin-dalàna amin'ny famolavolana fitsipika. Mora ny manitsakitsaka ny fitsipiky ny elanelam-potoana pcb ary hamaritra izany ny lesoka mamonjy anao tsy mila manaja ny pcb.
Dingana 11: Output Gerber Files - Raha tsy misy hadisoana ny tabilao dia tonga ny fotoana famoahana ireo rakitra gerber. Ireo rakitra ireo dia manerantany ary ilain'ny trano fanamboarana pcb hanamboarana ny tabilao misy anao.
Aorian'ny famolavolana PCB, azontsika atao ihany koa ny mitondra ny volanao amin'ny zava-misy amin'ny alàlan'ny fanamboarana PCB sy serivisy fivoriambe PCB.